वैज्ञानिकहरुले दिए खुशीको खबर ! को’रोनालाई नाकमा नै रोक्ने इन्हेलर बनेको दा’बी – Sanchar Patrika
वैज्ञानिकहरुले दिए खुशीको खबर ! को’रोनालाई नाकमा नै रोक्ने इन्हेलर बनेको दा’बी
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले यस्तो इन्हेलर बनाएका छन्, जसले को’रोना रोक्नमा पीपीईभन्दा बढी सुरक्षा दिनेछ । यो दाबी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयकका शोधकर्ताहरुले आफ्नो अध्ययनमा गरेका छन् । यो इन्हेलरलाई ‘एरोन्याब्स’ नाम दिइएको छ जसलाई प्रयोग गर्न नाकमा स्प्रे गर्नुपर्नेछ । यो इन्हेलरमा विशेष प्रकारको न्यानोबडी रहेको छ जुन एन्टीबडीबाट तयार गरिएको हो ।
यो एन्टीबडी लामा र ऊँट जस्ता जनावरमा पाइन्छ जसले शरीरलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता दिन्छ । इन्हेलरमा रहेको न्यानोबडीलाई ल्याबमा तयार गरिएको हो । यो जेनेटिकल्ली मोडिफाइड गरेर को’रोनालाई रोक्नका लागि विकसित गरिएको हो ।
ल्याबमा गरिएको प्रयोगका दौरान को’रोनाको सं’क्रमण शरीरमा फैलिनबाट रोक्न एन्टीबडीले काम गर्ने देखियो । एन्टीबडीजस्तै न्यानोबडी पनि प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ । यो एन्टीबडीको सुक्ष्मरुप हो र यो अधिक संख्यामा बनाउन सकिन्छ । न्यानोबडीको खोज सन् १९८० मा बेल्जियमको ल्याबमा गरिएको थियो ।
शोधकर्ताका अनुसार जब को’रोना सं’क्रमण फैलिनका लागि आफ्नो स्पाइक प्रोटिन मानिसको एसीईटू रिसेप्टरमा जोड्छ, यो न्यानोबडीले त्यहीँ प्रोटिनलाई रोक्नछ । यसरी भाइरस एसीईटू रिसेप्टरसँग जोडिन पाउँदैन र सं’क्रमण हुँदैन । एसीइटू रिसेप्टर मानिसको कोशिकाको सतहमा पाइन्छ, यो कोरोना संक्रमणको इन्ट्री प्वाइन्ट हो ।
शोधकर्ता पीटर वाल्टरका अनुसार जबसम्म खोप बन्दैन, त्यतिबेलासम्म एरोन्याब्स भाइरसबाट बच्ने सुरक्षित विकल्प हुनसक्छ । सार्स म’हामारीको दौरान पनि को’रोनाभा’इरसलाई निश्क्रिय गर्न न्यानोबडी तयार गरिएको थियो । शोधकर्ता आशिष मांगलिका अनुसार शोधकर्ताले प्रयोगशालामा २१ न्यानोबडी विकास गरेका छन् जुन को’रोनावि’रुद्ध काम गर्न सक्छ ।
शोधकर्ताहरुले यो नाकको स्प्रेलाई आम मानिससम्म पुर्याउन उत्पादक कम्पनीसँग करार गर्दैछ । चाँडै यसको मानिसमाथिको परीक्षण सुरु हुने विश्वास गरिएको छ । यदी यसले आशाअनुरुप शतप्रतिशत काम गरे यो महामारीलाई रोक्न निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
Prevभारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६६ हजार ९९९ को’रोना सं’क्रमित थपिए
Nextमास्क र चस्मा सँग सँगै लगाउदा चस्मामा बाफ भरिए के गरी छुटकरा पाउने ? जानकारी लिनुहोस
बेरोजगार युवालाई निर्व्याजी ऋण दिने